‘पार्टीले विधि अपनाए अध्यक्ष हुने म नै हुँ’ « Janata Samachar
‘पार्टीले विधि अपनाए अध्यक्ष हुने म नै हुँ’
अनेरास्ववियुका कारणले स्ववियु चुनाव रोकिदैन
प्रकाशित मिति : 10 February, 2019 5:00 pm
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को भातृ संगठन अनेरास्ववियु र अखिल (क्रान्तिकारी) को एकीकरण यतिखेर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुबै पक्षका विद्यार्थी नेता एकता चाडैँ छिनोफानो गर्न सक्रिय भइरहेका छन् । एकता घोषणा ढिलाईको कारण, स्ववियु चुनावको सन्दर्भ र समसामयिक विद्यार्थी राजनीतिक सवालमा केन्द्रित रहेर अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष रश्मी आचार्यले जनतासमाचार डटकमका लागि नरेश न्यौपानेसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः-
अनेरास्ववियुजस्तो अत्यन्त क्रियाशील संगठन आफ्नै मातृपार्टी सत्ताको नेतृत्वमा भएका बेला किन गुमनाम जस्तै देखिएको ?
अनेरास्ववियु गुमनाम देखियो भन्ने तर्कसँग म सहमत छैन् । हामी आफ्ना उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम र एजेण्डाको कार्यान्वयनका लागि निकै स्पष्ट र सजगताका साथ डटिरहेका छौं । आजपनि शैक्षिक मुद्दा स्थापित गर्ने र विश्वविद्यालयमा नजिकिरहेको स्ववियु निवार्चनलाई समयमै सम्पन्न गर्नका प्रयत्न गर्ने गरि सक्रियता बढाईरहेका छौं । हामी निरन्तर विद्यार्थीका प्रमुख एजेण्डा र राष्टका ज्वलन्त मुद्दामा चासो लिइरहेका छौं । तर हामी दुई संगठनको एकता सम्पन्न गर्ने चरणमा रहेकाले जसरी विद्यार्थीबीचमा जानुपर्ने थियो, त्यसरी योजनावद्द तरिकाले जान नसकेको चाहीँ सत्य हो । एकता पछि हामी रफ्तारमै अघि बढ्छौं ।
एकता के कारणले पर पर धकेलिरहेको हो ?
वास्तवमा दुईवटा फरक फरक मनोविज्ञान र राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु मुलुकको ऐतिहासिक आवश्यकताका कारण एक ठाउँमा आइपुगे । यसको मूल उद्देश्य भनेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर पार्टीको दीर्घकालीन लक्ष्य समाजवादको आधार तयार गर्दै साम्यवादसम्म पुग्नु नै हो । यसमा तपाईले संकेत गरेजस्तै पार्टी एकता र जनसंगठन एकताको काम समयमै सम्पन्न गर्न सक्दा संगठन र निर्देशित लक्ष्य प्राप्तिका लागि अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो । र एकताले सम्पुर्ण पार्टीपंत्तिलाई एकसुत्रमा बाँधेर उर्जा पैदा गर्नसक्नु पर्थ्याे। यसो गर्दा सम्पूर्ण पार्टी र कार्यकर्ता तहमा रक्तसञ्चार पनि हुन्थ्यो । तर एकतामा ढिलाई भइदिनाले केही समस्या पनि देखिने सम्भावना बढिरहेका छन् । मेरो विचारमा पार्टी एकता घोषणा भएकै बेला तलका दुवै पार्टीका कमिटीको पनि एकता भएकोे भए र नेतृत्व चयनका लागि स्थानीय कमिटी आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइदिएको भए यस्तो ढिलाई हुने नै थिएन । त्यसैले, एकताका लागि कायृदल बनाउने तर तिनका डकुमेन्टलाई पनि स्वकार्न नसक्ने जुन अवस्था देखिएको छ, किन यस्तो भइराखेको छ हामी पनि आश्चर्यमा छौं । यो कार्यदल मात्रै बनाउने चक्रको अन्त्य गनुपर्छ र बनेका कार्यदललाई काम गर्न दिने र भएका निर्णयलाई स्वीकार्ने हो भने धेरै समस्या होला जस्तो लाग्दैन । एकतामा विधिलाई आत्मसात गर्ने हो भने यो यति ठूलो विषय नै बन्दैन । पार्टीकै एकताको काम ढिलो भइरहेकाले हाम्रो एकता त झन कसरी अगाडी बढ्थ्यो र ?
तर पूर्व एमालेको भागमा अखिल पर्ने सम्भावना रहेको र भावी नेतृत्वको लागि तपाईभित्रै विवाद भएकोले संगठनको एकतामा ढिलाई भइरहेको भन्ने आशंका पनि आइरहेका छन नि ?
यसमा कुनै सत्यता छैन । मैले पाएको सूचनाको आधारमा भन्दा हाम्रा पुराना दुवै पार्टी नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीचमा कुन जनवर्गीय संगठन कसले पाउने भन्ने कुनै सहमति आजसम्म पनि बनिसकेको छैन । जबसम्म कुन संगठन कसले पाउने भन्ने कुरा टुंगिदैन तवसम्म त्यहाँभित्र कसले नेतृत्व गर्ने भनेर बहस नै शुरु हुँदैन । यो त कसैले अब केही दिनभित्रै अध्यक्ष बन्दै भनेर अफवाह फैलाएजस्तै, आफै आफैले बहस चलाएको विषय मात्र हो जस्तो लाग्छ । दुई तिन घण्टा पछि अध्यक्ष भइहाल्छु भन्ने ढंगले पनि कुराहरु आएका हुन नि । संगठन एकतामा त्यस्ता केटाकेटी तरिकाबाट आउने विषयहरुको कुनै अर्थ हुँदैन । विधि र वास्तविकता प्रमुख विषय हाेला नि ।
एकतामा भइरहेको ढिलाईले स्ववियु चुनाव नै नहुने परिस्थिति आउने भो नि ?
हामीले संगठनको नाममा सहमति गरिसकेका छौं । एकीकृत अखिलको नाम अनेरास्ववियू राख्ने भइसकेपछि हामीलाई चुनावमा जान कुनै अफ्ठ्यारो नै छैन । हाम्रा कारणले कुनैपनि हालतमा स्ववियु चुनाव रोकिदैन । चुनाव हुने स्थितिमा एकता टुंगिएन भने पनि दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर अनेरास्ववियूको नाममा चुनावमा जान सकिन्छ ।
अनेरास्ववियुले अहिले प्राथमिकताका साथ उठाइरहेका विद्यार्थीका सवाल के के छन् ?
हामीले मुलतः अबको विद्यार्थी आन्दोलनलाई शैक्षिक आन्दोलनसँग नै जोडेर अघि बढाउने सोचिरहेका छौं । हाम्रो मुख्य जोड भनेको विद्यार्थीलाई उत्पादनसँग जोड्ने र सबैभन्दा धेरै शैक्षिक विषयवस्तुमै केन्द्रित गर्नेछ । हामीले शिक्षा क्षेत्रमा विगतदेखि उठाउँदै आएका विषयहरुको अब बैठान गर्ने बेला आएको छ । हाम्रो शिक्षाले केवल सर्टिफिकेटमात्रै उत्पादन गर्ने काम गरिरहेकोले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो अबको अभियान भनेको शिक्षालाई उत्पादनसँग जोडेर स्वरोजगारमुखी बनाउने हो । यसका लागि हामी प्राविधिक शिक्षाको कार्यान्वयनलाई विशेष जोड दिइरहेका छौं । त्यसैले अबको विद्यार्थी आन्दोलनको प्रमुख एजेण्डा भनेको शैक्षिक क्रान्ति नै हो ।
एकतापछि आउने एकीकृत अखिलको नेतृत्वमा तपाई आउने सम्भावना कति छ ?
यदि पार्टीले एउटा विधि र मापदण्ड बनाउने र संगठन तथा विद्यमान विद्यार्थी आन्दोलनको आवश्यतालाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्व चयन गर्न खोज्यो भने अहिलेको अखिलले नै नेतृत्व पाउने अवस्थामा सबै हिसाबले अध्यक्ष हुने भनेको म नै हो । १८ औं महाधिवेशनबाट निवार्चित मध्य वर्तमान अध्यक्ष नविना लामा र म मात्रै अहिले अखिलमा छौं । बाँकी पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो । यद्यपि नेतृत्वले गरेको निर्णय सबैले मानेर जानु नै पर्छ ।